Kedu ebe kachasị ebili mmiri n'ụwa? | Netwọk Mgbasa Ozi
Oge oké ifufe bụ, maka anyị bụ ndị na-achọ ịhụ àmụ̀mà ma nụ égbè eluigwe ahụ, yana igwe ojii Cumulonimbus na-abịaru nso ka ha na-etolite, ụfọdụ n’ime ihe ịtụnanya niile na-eme.
O bu ihe nwute, n’otu uzo nke mmiri obula n’adighi onye obula choro, enwere ndi g’eri obi karie ihe ndia. Ha bụ ndị bi na ya ebe ebili mmiri na ụwa.
1 Àmụmà Catatumbo (Ọdọ Maracaibo, Venezuela)
3 Basin Congo (Africa)
Àmụmà Catatumbo (Ọdọ Maracaibo, Venezuela)
N’obodo a nke dị na mgbago ugwu ọdịda anyanwụ nke Venezuela, n’etiti Osimiri Catatumbo na Ọdọ Mmiri Maracaibo, ihe pụrụ iche a maara dị ka àmụmà Catatumbo pụtara. Ọ na-etolite n'igwe ojii nke nnukwu mmepe dị n'etiti 1 na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 4 kilomita n'ịdị elu.
I nwere ike ịnụ ụtọ ihe ngosi a ruo mgbe Oge 260 n’afọ, na ruo elekere iri nke ụtụtụ n’otu abalị. Na mgbakwunye, ọ nwere ike iru nbudata iri isii kwa nkeji.
Nke a bụ obodo dị n’akụkụ nnukwu ugwu ọkụ, na agwaetiti Java, n’Indonesia. Nke a nwere ike ịbụ 322 ụbọchị nke oké ifufe kwa afọ. Ọ bụ ezie na ihe ka ọtụtụ na-eme na ugwu mgbawa, ọ bụrụ na anyị na-achọ ebe oke ifufe, nke ahụ bụ Bogor. A na-enwe oke ebili mmiri kwa ụbọchị!
Basin Congo (Africa)
N'akụkụ a nke ụwa, karịsịa n'obodo Bunia (Republic of Congo), ndị bi na ya nwere ike ịhụ 228 oké ifufe kwa afọ. Ọ dị ka nke Bogor, mana ọ karịrị nke anyị nwere ike ịhụ na Spen, nke dị n’agbata ụbọchị iri na iri anọ, ọ dabere na mpaghara anyị nọ.
N'ime obodo Lakeland, dị na Florida (United States), na mgbakwunye na inwe oke ala mara mma, ha nwere ike ịnya isi na ha Daysbọchị 130 toementa afọ.
Ya mere ugbu a na ị maara, ọ bụrụ na ị na-eche echiche iji ebe ole na ole magburu onwe ya ebe, gaa na nke ọ bụla n'ime ndị m kwuru na ị ga-ekpori ndụ oge.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Netwọk Mgbasa Ozi » Foto » Kedu ebe kachasị ebili mmiri n'ụwa?